Ndeupi mutemo weVashandi 'uye nei uchikosha kudaro | Ehupfumi Zvemari
Mamiriro ese ekushanda, zvisinei nezvingaitwe zviri nani muZvibvumirano zveVanhu, zvinokonzerwa neMutemo weVashandi, mutemo unosimbisa mabhesheni ebasa, maererano nemubhadharo, maawa ebasa, zororo rekusavapo, hurema ... Asi , Ndeupi mutemo weVashandi? Nei yakakosha?
Kana iwe wakambonzwa nezvazvo asi usina chokwadi kuti nei ichikosha uye kuti ingakukanganisa sei pabasa rako, inguva yekuti iwe uzive chimwe chezvishandiso zvine simba kwazvo zvevashandi.
1 Ndeupi mutemo weVashandi
2 Chii chinogadzirisa Mutemo weVashandi
3 Statute Yevashandi vs Chibvumirano Chekubatana
4 Chii chinoitika kana nechibvumirano kana Chibvumirano cheKubatana chimwe chinhu chinodiwa kwandiri chisingatenderwe muState Yevashandi
5 Ndezvipi zvakakosha zvikamu
Iyo Workers 'Statute, inozivikanwawo nechidimbu chayo, ET, iri chaizvo kodhi, a mutemo wepamutemo, unoshanda kune vese vashandi vanoshanda. Ndokunge, kune chero mushandi ane chibvumirano chebasa nekambani kana nemumwe munhu. Iri ibasa rekugadzirisa hukama hwevashandi hune vaviri vamiririri, kune rumwe rutivi mushandi, uye kune mumwe mushandirwi.
Kubva payakazvarwa muna 1980, yave uye ndiyo inonyanya kukosha murau wehukama hwevashandi. Zvino, inosimbisa iwo mashoma, ndokuti, neChibvumirano Chibvumirano, nechibvumirano, nezvimwe. zvinotaurwa neVashandi Statute zvinogona kuvandudzwa.
Semuenzaniso, fungidzira kuti mutemo wevashandi unokupa iwe mazuva mashanu ekufa kwemunhu. Kune rimwe divi, mukambani yako, nechibvumirano, mazuva anoenderana newe ari 5. Hapana kupokana, asi izvo zvinotaurwa neET ndezvokuti huwandu hwemazuva ndiwo mashanu, asi kune iyo kambani pane uve wakawanda.
Semutemo, hutongi hwemamiriro ekushanda hwaizosara saka: Chekutanga, izvo zvakasimbiswa muchibvumirano chebasa; zvino zvinotaurwa muchibvumirano chekubatana. Uye, pakupedzisira, zvinotaurwa neVashandi Statute.
Izvi hazvireve kuti nechibvumirano chebasa mamiriro akaipa anogona kugamuchirwa. Iwo ET mashoma anofanira kugara achivimbiswa nekuti kana izvi zvisiri izvo, zvinogona kutaurwa.
Kwemakore, iyo Workers 'Statute yakagadziridzwa, kuti ive iri nani uye neyakaipisisa, nezvevashandi vanoshanda. Chimwe chinonyanya kushamisa, uye icho chaunofanira kufunga nezvacho, ndechekuti, kunyangwe vanozvishandira kana vanozvishandira vakasiyiwa, zvakatemwa kuti vanozvimiririra vehupfumi vanozvichengetedza pasi pemutemo uyu sekureba sekumwe zvinodiwa zvakasangana.
Chii chinogadzirisa Mutemo weVashandi
Iye zvino zvaunenge uchiziva kuti iyo Workers 'Statute, zvirokwazvo uchave uchishamisika kuti ndezvipi zvirimo. Uye ndezvekuti, nenzira yakajairika, inosimbisa mabhesheni ane chekuita nebasa (semuenzaniso, kutaura kuti zera ripi raunogona kushanda), pamwe nezuva rekushanda, nguva dzekuyedzwa, muripo, kudzingwa, maitiro emakondirakiti, Siya yekusavapo, kutadza kushanda, kushanda husiku, kuwedzerwa nguva ...
Mune mamwe mazwi, une mutemo wepamutemo umo iwo madiki mareti ehukama hwebasa anopiwa muzvinhu zvese zvinogona kukukanganisa.
Neichi chikonzero, iyo Workers 'Statute yakakamurwa kuita matatu mazita:
Yehukama hwehukama hwemunhu.
Kodzero dzevamiririri pamwe uye musangano wevashandi mukambani.
Paboka rekutaurirana uye Chibvumirano Chibvumirano.
Aya mazita matatu makuru akaparadzaniswa kuita zvitsauko, zvikamu nezvinyorwa, anosvika makumi mapfumbamwe nemaviri.
Statute Yevashandi vs Chibvumirano Chekubatana
Sezvatakambotaura, iyo Workers 'Statute inogadza mashoma mamiriro ehukama hwevashandi, asi izvi zvinogona kuvandudzwa nechibvumirano chebasa kana zvakare nechibvumirano chakabatana. Izvi zvinoreva here kuti Gungano iri nani?
Chibvumirano Chekubatanidza mutemo unosimuka semhedzisiro yekutaurirana pakati pevamiriri vevashandi nekambani pachayo. Dzimwe nguva hazvikanganisa kambani chete, asi chikamu (semuenzaniso, indasitiri yesimbi, chikamu chemukaka ...). Ivo vane yakatarwa nguva uye inosimbisa mamiriro ekushanda, pamwe nekodzero uye zvisungo zvebato rega rega. (vashandi nekambani). Ehe, inofanirwa kutevedzera iwo mashoma mamiriro ari muVashandi Statute.
Tinogona kutaura kuti Chibvumirano cheKubatanidzwa chibvumirano chakazara chebasa, uko zvinhu zvakaita semazororo, mvumo, maawa ekushanda, muripo, nezvimwe.
Chii chinoitika kana nechibvumirano kana Chibvumirano cheKubatana chimwe chinhu chinodiwa kwandiri chisingatenderwe muState Yevashandi
Hazvishamise kuwana mamiriro ezvinhu umo, nechibvumirano chebasa, Chibvumirano cheKubatanidzwa, kana kunyangwe zuva nezuva, makambani kana vashandirwi vanoda kubva kune avo vashandi mamiriro anopokana neiyo Workers 'Statute (semuenzaniso, kuisa mamwe maawa, kusava nezororo kana izvo zvisina kubhadharwa, nezvimwewo).
Kana izvi zvikaitika, mutemo unoshandiswa ndiwo Statute Yevashandi. Mune mamwe mazwi, kana paine chimwe chinhu muKubatana Bargaining Agreement kana muchibvumirano chinopesana nezvinoratidzwa neET, chirevo ichocho chinobviswa zvoga, nekuti izvo zviga zvemitemo zvinofanirwa kuremekedzwa.
Zvisinei, chokwadi chinogona kunge chakasiyana, nekuti vazhinji vanogona kugamuchira aya mamiriro kuti varambe vachishanda.
Ndezvipi zvakakosha zvikamu
Muzvikamu zvese makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe zvinoumba ET, iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvimwe zvikamu zvakakosha zvakanyanya, kungave nekuti zvakabvunzwa zvakanyanya kana nekuti zvine chekuita nezvakakosha zvehukama hwevashandi.
Mupfungwa iyi, ivo vari:
Zuva rekushanda uye mabhureki. Zvinoenderana neiyo Workers 'Statute, kune rakanyanya zuva rekushanda kwemaawa makumi mana pasvondo, kunyangwe nechibvumirano vanogona kunge vari vashoma. Kana zviri zvekuzorora, pane zvinodiwa kuti pave nemaawa gumi nemaviri ekuzorora. Uye, kana zuva rikapfuura maawa matanhatu, pachave nekuzorora kwemaminetsi gumi nemashanu.
Kodzero dzevashandi. Nezve kukwidziridzwa kwemukati, kusasarura, kutendeka mumuviri, chiremerera, kudzidziswa pabasa ...
Maitiro akarambidzwa. Zvakadai sebasa revadiki vari pasi pegumi nematanhatu (kunze kwekusiiwa) kana kuita yakawandisa kana basa rehusiku kuvana vari pasi pemakore gumi nemasere
Sezvauri kuona, iyo yakasarudzika tsika iyo iri Workers 'Statute inobvumidza kutonga zvakaenzana hukama hwevashandi kune vashandi nevashandirwi. Wakambove nematambudziko erudzi urwu here? Tizivise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Ndeupi mutemo weVashandi